PETUNIA WUU QALLAJIYAA: WAXA LA SAMEEYO HADDII AY KU DHACDO CALEEMAHA HOOSE IYO QAYBAHA KALE EE UBAXA, SABABTA AY U DHACDO, SIDA LOO BADBAADIYO, IYO SIDOO KALE QARSOONAANTA DARYEESHA GEEDKA - SOOSAARKA DALAGGA
Waa maxay sababta petunia u qallajisay, maxaan sameeyaa si aan u soo celiyo ubax iyo sida loo daryeelo?
Petunia waa ubax aad uwanaagsan oo hoyleeyaal badan, mana jiro wax la yaab leh tan: ma aha wax adag in la daryeello, ma aha mid lagu kala gooyo adkaanta ubaxyada, iyo sidoo kale, waxaa lagu kala soocay midabkeeda pisto. Si kastaba ha ahaatee, bannaanka iyo guri-guri-guri aan badnayn ayaa la kulma dhibaatada qalajinta petunias. Maqaalkani waxaan ka wada hadli doonaa sababaha ubaxaynta ubaxa, waa in lagu sameeyaa xaaladaha noocaas ah, iyo sidoo kale xeerarka ilaalinta saxda ah ee geedka.
Qalajinta xayawaaniinta waa dhibaato weyn oo loo qabo beerta.. Si looga fogaado qalajinta dhirta, waa inaad taqaanaa sababaha.
Daryeel aan haboonayn
Sida ficil ahaan u muujiso, badanaa sababta qalajinta waxay noqon kartaa daryeel aan haboonayn, oo ay ku jiri karto:
Cawada hawada cusub. Si koritaanka saxda ah ee warshadda, waa lagama maarmaan in la "ventilate" ubax sida ugu badan ee suurtagal ah, furitaanka daaqad ama daaqad cimilada diiran.
Biyaha aan ku filneyn. Wixii biyo ah oo aan ku filneyn, waxaad qaadan kartaa biyo aan caadi aheyn inta lagu jiro mawjada kulaylka, ama xad-dhaaf ah qoyaanka ciidda inta lagu jiro xilliga qaboobaha (xididdada caleemaha, tanina waxay ka muuqataa caleemaha).
Cayayaanka khatarta ah
Maxaa dhacaya haddii sababtu aysan ku jirin daryeelka qaldan? Waxa kale oo ay dhacdaa in sababta petunias loo qalajiyo ay noqon karto cayayaanka. Cayayaanka khatarta ah ee loo yaqaan 'petunias' waa caarada caarada, aphids iyo nematodes.
Cayayaanka ayaa si xun u saameeya horumarka iyo jiritaanka dhirta, taas oo mustaqbalka saameyn karta qalajinta. Haddii aadan qaadin tallaaboyin waqtigaa, petunia way dhiman kartaa.
Waxaan soo bandhignaa daawashada video ee ku saabsan cayayaanka petunia:
Badanaa, infakshanka fungal si dhakhso ah u socda ayaa u adeegi kara cudurada petuniyiin. Habka caabuqu waa sahlan yahay waana cad yahay: fangasku wuxuu ku dhufaa maraakiibta aagga asaasiga ah mana ogolaanayo in nafaqooyinka ay gaaraan cirridka iyo caleemaha. Warshadu ma helayso qoyaan, nafaqo, iyo si tartiib tartiib ah.
Waa maxay sababta caleemo hoose u qalalan?
Sida caadiga ah qalajinta caleemaha hoose ee warshadu waxay dhacdaa xilliga ka dambeeya dhammaadka Agoosto ilaa horraantii Sebtembar. Sababta tani waa in dhirta ay ka weyn tahay 2 bilood isla markaana waxay joojinaysaa caleemo aan loo baahnayn.
Haddii arrintu aanay ku jirin da'da geedka, markaas sabab kale waxay noqon kartaa iftiinka aan ku filneyn ee geedka. Tani waxay dhacdaa marka petunia ay ku jirto meel mugdi ah muddo dheer. Guud ahaan, sababaha qalajinta caleemaha hoose waa ku filan.
Waxaa ka mid ah kuwa ugu caansan:
Cayayaanka (caarada caarada, aphids, nematodes).
Xaaladaha xun ee deegaanka.
Qadarka ku filan ee birta ee ciidda.
Maxaa la sameeyaa marka qalajinta dhirta?
Waxqabadyada gaarka ah ee kororka waxay ku xiran tahay sababta dhabta ah. Daryeelka aan habooneyn, waxaad u baahan tahay keliya inaad dib u eegto xaaladaha xabsiga, iyo marka ay ku dhacdo dulin, daaweyn deg-deg ah oo kiimiko ah ayaa lagama maarmaan ah.
Waraabinta khaldan. Haddii sababtu tahay qalajinta ayaa ku jirta waraabinta khaldan, ka dibna warshadda sida qiyaasta ka hortagga ah waa in lagu dhajiyo dheriyo kale oo ku rusheeyaa dheecaan si ciid ah.
Qamadi ciriiri. Si looga fogaado qalajinta, meelaha haray ee geedka waa in laga saaraa meelahana lagu daaweeyo jeeso ama dhuxul.
Macmacaanka macaanka. Bilowga waxay ku habboon tahay inaad ka saarto qaybaha waxyeellada leh ee geedka iyo ku ridista hawada kulul diiran ilaa 15-20 daqiiqo. Dheeraad ah, ciidda waa in la daweeyo, ciidda waa in lagu daaweeyaa fungicide.
Chlorosis Iron. Si looga fogaado qalajinta, dhirta waa in lagu daaweeyaa xal of citric acid iyo sulfate ferrous. Daaweyntu waa inay ahaato 1-3 jeer maalintii.
Aphid. Waxaa lagama maarmaan ah in laga takhaluso aphids gacmahaaga, ka dibna geedi socodka warshad leh xalka xargaha, fufanon iyo kalsooni. Ku celi nidaamka hal mar maalintii.
Nematodes. Nematodes waxay leeyihiin saameyn waxyeello geedka, waana ay adag tahay in laga takhaluso. Si aad uga takhalustid waa inaad isku daydaa qalabka "Narcissus". Haddii aysan ku caawin, markaa petunia waa in lagu beeraa ciid cusub.
Caarada caarada. Si aad uga takhalustid, waa in aad diyaarisaa xal neoron ah iyo calaamado kala duwan oo ah 1-2 iyo 0.5 millilitir halkii litir. Si aad u qoyso qaybta hoose ee geedka.
Waa muhiim inaad ogaato taas waxaa suurtogal ah in dib loo soo celiyo warshad qalajin kaliya haddii ay leedahay ugu yaraan hal qayb oo nool oo ka hartay. Haddii bukaanku si buuxda u qalajiyo, markaa ma jirto fursad dib u soo nooleyn ah.
Bal qiyaas in aan haysanno hal degen oo keliya. Si aad u celiso warshadda kiiskan, waxaad u baahan doontaa inaad gebi ahaan ku nadiifiso biyo nadiif ah, oo sug saddex saacadood, ka dib markaad jarayso qaybaha la qalajiyey iyo kuwa dhintay.
Waxaa jira meel loo noqdo oo lagu dhajiyo geedka baaldi biyo diirran maalintii oo dhan. Qaarkood xitaa waxay tixgeliyaan habkan si wax ku ool ah Haddii geeddi-socodka "qallajin" geedka caleemaha yaryar, macnaheedu waa in uu bilaabo inuu soo nooleeyo.
Qarsoonaanta daryeelka saxda ah
Isaga oo ka hadlaya daryeelka saxda ah ee geedka, waxaa habboon in la xuso marar badan in noocyo waaweyn oo ubax ah aysan jecelneyn qoyanaanta ama hooska qayb ahaanta ah, dabayl iyo roobab culus ayaa si gaar ah u argagax leh. Haddii aynu guud ahaan ka hadalno petunia, markaa, sida dhirta kale, waxay u baahan tahay waraabinta habboon ee ninkii beerta ka shaqaynayay. Biyaha warshaduhu waa inay noqdaan kuwo qalajinaya.
Haddii aad qabto ubax balakoonka waa in la waraabiyaa mar ama laba maalmood oo kasta.
Haddii sariirta - hal mar laba maalmood ama maalin walba cimilada kulul.
Xaaladna maaha inay u oggolaato acidification ee ciidda iyo joogitaanka biyaha - tani waxay keeni doontaa dhimashada degdeg ah ee ubax ah!
Sida for Bacriminta, petunia halkan aan qabyo ahayn.. Bacriminta waxay ku haboonaan doonaan wax kasta, marka laga reebo digada cusub. Si kastaba ha ahaatee, tababar ayaa muujinaya in dhirta ku koraan pststotsvetuschim iyo iyada oo aan bacriminta kasta.
Waxaanu soo bandhignaa si aan u daawano fiidiyo ku saabsan sida si haboon loogu daryeelo petunia:
Beeraley kasta oo ku hawlan beerista petunia, wuxuu rabaa in uu u arko qaabka qof weyn, geedka ubax. Si ubax loogu qalajiyo si aan loo madoobin rabitaankeeda, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sababaha suurtagalka ah ee geedi socodkan oo aad u dalxiiso daryeel habboon oo loogu talagalay petunia.